'राजश्व घटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट बनाउँदैछौं'
‘राजश्व घटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट बनाउँदैछौं’
डा. युवराज खतिवडा , २२ बैशाख २०७७, सोमबार, १२:३२ pm
समयमै अन्तराष्ट्रिय उडान र सिमा नाकाहरु बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको छ । सिमा नाकाबाट भैरहेका ओहोर दोहोरका कारण हुने संक्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएका छन् । तर समयमै सिमा नाका बन्द नगरिएको भए आज भयावह अवस्था आउने थियो ।
हामीले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिदलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि बिशेष ध्यान दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव छैन् । बैशाखसम्म एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं ।
रक्षा मन्त्रालय मार्फत कोरोना उपचकरण खरिदका लागि २ अर्ब २० करोड निकासा गरिएको छ । नेपाल सरकारले नै गठन गरेको कोरोना कोषमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जुन कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ हालेको छ । यो कोषबाट उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वमा कार्यबिध बनेको थियो । त्यसकै सिफारिसका आधारमा अर्थमन्त्रालयले कोरोना कोषको रकम खर्च गरिरहेको छ । जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएका छौं ।
राजश्व संकलनमा कमि
अन्तराष्ट्रिय सिमा नाका र व्यापार बन्द गर्दा राजश्व संकलनमा असर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै हामी राजश्व संकलनमा केहि दबावमा थियौं । आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्सार दरहरु परिवर्तन गर्दा राजश्व संकलनमा दबाव बढेको थियो । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण त्यसमा थप दबाव देखियो । चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाई मात्रै उठिरहेको छ । चैत मसान्तसम्मको मात्रै कुरा गर्ने हो भने राजश्व लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत संकलन भएको छ । भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तशुल्क लगायत अरु करहरु पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केहि चाप बढेकै छ ।
अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालन
योबीचमा अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई हामीले अलि बढी जोड दिएका छौं । दाताहरुबाट उल्लेख्य प्रतिवद्धताहरु प्राप्त भएका छन् । अहिले सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहत लगायतका काममा करिब डेढदेखि २ खर्ब जति सहायतामा सम्झौता भैसकेको छ । अरु केहि नयाँ सम्झौताहरु पनि हुने चरणमा रहेका छन्। आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरि जुटिरहेका छौं ।
कति भयो खर्च ?
खर्च तर्फ पनि यो वर्ष पनि थोरै नै भैरहेको थियो । यो बीचमा केहि समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भयो । कतिपय आयोजना लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाउन सकिएन् । कोरोनाले यतिबेला थप चाप पारेको छ । चैत मसान्तसम्म चालु तर्फ ४८८ अर्ब खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको ५१ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ जम्मा १०५ अर्ब खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर नै धेरै हुने गरेको छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ६७६ अर्ब खर्च गरेको छ ।
२० अर्ब बजेट सरेण्डर
चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको रकम कानुनतः सरेण्डर गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बिभिन्न मन्त्रालयहरुले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सरेण्डर गरिसकेका छन् ।
राहतमा नयाँ मापदण्ड
सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा कामदारहरुलाई राहत दिने योजना ल्याएको थियो । तर राहत दुरुपयोग भएका सूचनाहरु आएपछि सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहहरुले काममा लगाउने र त्यस वापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका छौं । काममा नआउनेहरुलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाई बराबरको मात्रै राहत दिने भनेका छौं ।
बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधी चैतबाट असार मसान्तमा पुर्याएका छौं । पर्यटन क्षेत्र भने असारपछि पनि सुचारु नहुने देखिएकाले केन्द्रिय बैंकलाई भनेर ऋणको पुनर्तालिककरण गर्ने, प्रोभिजन नगर्ने भनिएको छ । ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउनु भनेका छौं । पुनकर्जाको आकार पनि ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्बको बनाएका छौं ।
करमा पनि राहत
कर र भन्सारका बिषयमा पनि केहि राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएका छौं । चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई बैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाएका छौं । कतिपय अरु करलाई जेठ २५ सम्म तिरे हुने बनाएका छौं । भन्सारका सवालमा पनि बैशाखबाट सारेर जेष्ठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएका छौं ।
औषधी र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत आयातमा भन्सार छुट दिएका छौं । कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने कामहरुमा विलम्व शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिदिएका छौं । बीमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थपिदिएका छौं । धितोपत्रमा पनि सूचिकृत कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने विवरणहरु असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने भनिदिएका छौं । –अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
कोरोना कोषमा बीमा समितिले दियो दुई करोड
कोरोना कोषमा आयल निगमको ५० करोड सहयोग, हालसम्मकै सर्वाधिक योगदान
पुसमा उत्साहजनक राजश्व संकलन, अर्थमन्त्रीलाई राहत
बूढानीलकण्ठमा २१ र कागेश्वरीमा २३ जनामा आरडिटी पोजेटिभ, शङ्खरापुर ‘सिल’